Proff Maxamed Cabdi Yuusuf oo ku geeriyooday dalka Faransiiska - Jowhar somali news leader
Home NEWS Proff Maxamed Cabdi Yuusuf oo ku geeriyooday dalka Faransiiska
Proff Maxamed Cabdi Yuusuf oo ku geeriyooday dalka Faransiiska
Allaha u naxariistee waxaa dalka Faransiiska ku geeriyooday Prof. Maxamed Cabdi Gaandi oo ka tirsanaa Golaha Shacabka iyo xubin ka tirsan Midowga Musharaxiinta.
Alllaha u naxariistaa Maxamed Cabdi Maxamed (Gaandhi) ayaa dhashay sanadkii 1949 wuxuuna xilal kala duwan ka soo qabtay dalka Soomaaliya, waxaa uu noqday safiirka Soomaaliya ee dalka Canada,Wasiirka Gaashaandhigga dowlada federalka.
Proff Gaandhi waxa uu muddo dheer wax ka dhigi jirey jaamacadaha dalka Faransiiska waxana uu hore isugu so sharaxay Madaxweynaha Jubbaland halka uu haatan ka mid ahaa Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Jamhuuriyada Federalka Soomaliya.
Prof Gandi wuxuu kasoo shaqeeyey Heya’adda UNDP Xafiiskeedda Somalia wuxuu xubin firfircoon ka ahaa ururadda u dooda nabadda.
Waxaa uu madax ka ahaa Guddigii farsamada ee shirarkii Carta, Djibouti ee Madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan lagu doortay, waxaa uu sidoo kale hogaaminayey ururada bulshada shirkii Kenya ee Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf sidoo kale lagu doortay, waxaa uu muddo gaaban ahaa wasiirka gaashaandhigga.
2011: Waxaa uu ku dhawaaqay maamulka Azaaniya isaga oo hoggaamiye ka noqday (2011-2013) kadibna Safiirka Soomaaliya ee Canada(2014), baarlamaanka 10-aad ayuu ka mid noqday, waxaa uu noqday guddoomiyaha guddiga Dib-u-heshiisiinta.
Prof Gandi wuxuu ahaa Dadka ugu Aqoonta Badan Soomaalida wuxuu Diyaariyey Lab Shahaado oo sare ” PH.D. ” Sidoo kale wuxuu Qoray 12 Buug iyo in 50 Maqaal oo isugu Jira cilmi Baadhiso kala duwan.
Hadda wuxuu ahaa xubin Baarlamaan oo ka tirsan aqalka hoose ee Gollaha Shacabka,sidoo kale na ah musharax madaxweyne oo xubin ka ah Madasha midowga Musharaxiinta isagoo ahaa Guddoomiye ku-xigeen midowga musharaxiinta,
Previous articleSeveral civilians killed in armed raid at funeral, village in western Niger
Next articleNow playing: The Barista! Movie posters in Paris cinemas feature lockdown heroes
Wararkii ugu dambeeyay Shaqaaqada Falastiin(Sawiro)
Marti sharaf gaartay Jabuuti ka hor xaflada caleema saarka